လက်ကျန်မာနလေး ထားပါရစေ …. - ONE DAILY MEDIA
လက်ကျန်မာနလေး ထားပါရစေ ….
စပြီး ခေါ်တဲ့သူက မရှုံးဘူးတဲ့ ခေါ်ချင်နေပါရဲ့နဲ့ မခေါ်နိုင်တဲ့သူကမှ ရှုံးတယ်တဲ့ ရှုံးပါစေ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ဘက်ကနောက်ဆုံးမာနလေးထားပြီ မခေါ်ပဲနေပါမယ် …. ဝေးချင်လဲဝေးပါစေတော့မဟုတ်ဘူး သူသာ တကယ်လိုအပ်ရင် သူထပ်ရှိလာဦးမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးလေးပဲ ရှိတော့တာပါ
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင်လိုချင် တစ်ဖက်က မကြည်ဖြူဘူးဆိုရင် ကိုယ်လဲ မလိုချင်တော့ဘူးလေ တောင့်တတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ မရနိုင်မှန်းသိတဲ့အခါ မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပစ်လိုက်ရတာပဲလေ … သူ့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေပေါ့ ကိုယ်ဘယ်တုန်းကမှ မရနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေလေ …
နှစ်မြို့စရာ မကောင်းဘူးလို့ထင်နေတဲ့မျက်လုံးမှာ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုပဲနေနေတန်ဖိုးရှိလာမှာမဟုတ်သလို အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ဆီက တန်ဖိုးနားလည်ခြင်းကို မျှော်နေရတာဟာ တကယ်တမ်းကျတော့ အဆင်မပြေလှဘူး
ဒီတစ်ကြိမ်တော့ လက်ကျန်မာနလေးထားပါရစေ … ဘာကြောင့်လဲမေးရင် ကျွန်မ ထပ်ပြီးမရှုံးချင်တော့သလို ကျွန်မ မနာကျင်ရသလို ပြုံးနေချင်သေးတယ် ပြီးတော့ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အနိုင်လိုချင်နေသေးတယ် ကျွန်မ အချိန်တွေ အများကြီး ဖြုန်းခဲ့ပြီးပြီ မျက်ရည်တွေအများကြီး ကျခဲ့ရပြီးပြီ
ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကို ကိုယ်လဲမဆက်ပဲနေရင်းက မနာကျင်တော့သလို ပြုံးပြုံးလေး နေနေဖို့ပဲ ရွေးတော့မယ် …
လက္က်န္မာနေလး ထားပါရေစ ….
စျပီး ေခၚတဲ့သူက မရံႈးဘူးတဲ့ ေခၚခ်င္ေနပါရဲ႕နဲ႕ မေခၚနုိင္တဲ့သူကမွ ရံႈးတယ္တဲ့ ရံႈးပါေစ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကို္ယ့္ဘက္ကေနာက္ဆံုးမာနေလးထားျပီ မေခၚပဲေနပါမယ္ …. ေ၀းခ်င္လဲေ၀းပါေစေတာ့မဟုတ္ဘူး သူသာ တကယ္လုိအပ္ရင္ သူထပ္ရွိလာဦးမွာပါဆိုတဲ့ အေတြးေလးပဲ ရွိေတာ့တာပါ
ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ပဲ လုိခ်င္လိုခ်င္ တစ္ဖက္က မၾကည္ျဖဴဘူးဆိုရင္ ကိုယ္လဲ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူးေလ ေတာင့္တတယ္ဆိုေပမယ့္လဲ မရနုိင္မွန္းသိတဲ့အခါ မလိုအပ္ပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ႕ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ပစ္လိုက္ရတာပဲေလ … သူ့ရဲ႕ ဂရုစိုက္မႈေတြေပါ့ ကိုယ္ဘယ္တုန္းကမွ မရနိုင္ခဲ့တဲ့အရာေတြေလ …
နွစ္ျမိဳ႕စရာ မေကာင္းဘူးလို့ထင္ေနတဲ့မ်က္လံုးမွာ ကုိယ္ဟာ ဘယ္လိုပဲေနေနတန္ဖိုးရွိလာမွာမဟုတ္သလုိ အဲ့လုိလူတစ္ေယာက္ဆီက တန္ဖုိးနားလည္ျခင္းကို ေမွ်ာ္ေနရတာဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဆင္မေျပလွဘူး
ဒီတစ္ၾကိမ္ေတာ့ လက္က်န္မာနေလးထားပါရေစ … ဘာေၾကာင့္လဲေမးရင္ ကြ်န္မ ထပ္ျပီးမရံႈးခ်င္ေတာ့သလုိ ကြ်န္မ မနာက်င္ရသလုိ ျပံဳးေနခ်င္ေသးတယ္ ျပီးေတာ့ ဒီတစ္ၾကိမ္ေတာ့ အနိုင္လုိခ်င္ေနေသးတယ္ ကြ်န္မ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီး ျဖဳန္းခဲ့ျပီးျပီ မ်က္ရည္ေတြအမ်ားၾကီး က်ခဲ့ရျပီးျပီ
ဒီတစ္ၾကိမ္ေတာ့ မေခၚတဲ့ဖုန္းေတြကို ကိုယ္လဲမဆက္ပဲေနရင္းက မနာက်င္ေတာ့သလုိ ျပံဳးျပံဳးေလး ေနေနဖိုု့ပဲ ေရြးေတာ့မယ္ …
ငယ်ချစ်ဦး … မပိုင်ဆိုင်ရမှန်းလဲသိတယ် ဒါပေမယ့် ချစ်တယ်
သူမမှားပါဘူး ပိုချစ်မိတဲ့ ကိုယ်ပဲအစကတည်းက မှားနေခဲ့တာပါ …
ဒီအချက် ၇ ချက် သင့်မှာရှိနေရင် သင်လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပီ
Oct 3, 2021 One Daily Media
ပျော်ရွှင်သော ချစ်သူဘဝအတွက် လိုအပ်ချက် (၄)ခု
Sep 30, 2021 One Daily Media
မိန်းကလေးတွေ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်ပီးမှ ပိုလှလာတဲ့ အကြောင်းအရင်း
Sep 26, 2021 One Daily Media